ခန့်မှန်းချက်အမှားများကိုဆုချီးမြှင့်ခြင်းအတွက်ထူးခြားသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုံ့ပြန်မှု (Your Brain On Porn) (၂၀၁၀)
နတ် neuroscience ။ 2010 ဇွန်; 13 (6): 669-71 ။ EPub 2010 မေလ 16 ။
Cohen ကို JR, Asarnow RF, Sabb အက်ဖ်ဒဗလျူ, Bilder RM, Bookheimer SY, Knowlton BJ, Poldrack RA.
စိတ်ပညာဌာန, ကယ်လီဖိုးနီးယား Los Angeles မြို့၏တက္ကသိုလ်, Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ယခင်အလုပ်ကလူ့မြီးကောင်ပေါက်ဆုလာဘ်မှ hypersensitive ဖြစ်မည်အကြောင်းပြသထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကရာရှုထောင့်ကိုမသိရ ဆုလာဘ် အပြောင်းအလဲနဲ့ဒီတာဝန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုကွဲကွာနဲ့ ခန့်မှန်း အမှားအချက်ပြနှင့်အာရုံကြောကိုတွေ့ ခန့်မှန်း အာရုံကြောဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုအချက်ပြမှုများတန်ဖိုးကိုလုပ်ပါတယ်ခဲ့ပုံပေါ် မူတည်. ကွဲပြားသော်လည်းအဆိုပါ striatum အတွက်အမှားအချက်ပြမှုများ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သွားသည်။ ဒီအကြောင်းကြီးထွား dopaminergic အကြံပြု ခန့်မှန်း အမှား Response ကိုအထောက်အကူပြုရန် အပျိုပေါက် ဆုလာဘ် ရှာကြံ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဤသည် prefrontal cortex မှနှိုင်းယှဉ်လျှင် limbic ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များ၏အတော်လေးအစောပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ1မြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမကြာခဏ (သေးဆုလာဘ်မှအပြည့်အဝအထိခိုက်မခံမဟုတ်သူ) ကလေးများနှင့်လူကြီးများ (ဆုလာဘ်မှအထိခိုက်မခံသော်လည်း, ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်ရမ္မက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်သောသူ) နှစ်ဦးစလုံးထက်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုလုပ်လေ့ထိုကဲ့သို့သော။
အမူအကျင့်ဆုံးဖြတ်ချက်သီအိုရီအရ, ရွေးချယ်မှုများတစ်ဦးချင်းစီအလားအလာရွေးချယ်မှု (ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုး) မှတာဝန်ပေးတန်ဖိုးအားဖြင့်မောင်းနှင်နေကြသည်2။ ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးအားကိုယ်စားပြုမှုတစ်ဘုံလမ်းကြောင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော medial prefrontal cortex အတွက်စနစ်ဖြင့်တွက်ချက်နေသည်3,4။ သို့သော်တစ်ဦးပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဆူညံကမ်ဘာပျေါတှငျ adapter ပြုမူနိုင်ရန်အတွက်ဤတန်ဖိုးများကိုအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့် updated ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု၏မျှော်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အမှန်တကယ်ရလဒ်အကြားခြားနားချက်ကိုထင်ဟပ်5, ထို mesolimbic dopamine စနစ် phasic လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် coded နေကြတယ်6။ fMRI, သူတို့သည်များသောအားဖြင့် dopaminergic output ကို (ဥပမာထင်ဟပ်သည် ventral striatum အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြသည်, 7) ။ ကလေးများသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများ၏သဘောသဘာဝမသိနိုင်ပါဘူး။ မြီးကောင်ပေါက်ဆုချဖို့ hypersensitive striatal တုံ့ပြန်မှုရှိစေခြင်းငှါ8, ဒီတွေ့ရှိချက်အတန်ငယ်ကွဲလွဲနေသည်ပေမယ့်9,10။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာသင်ယူမှုပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများကိုဖြစ်စေများတွင်ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုများကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်11 (သဖန်းသီး။ 1; မြင် နောက်ဆက်တွဲနည်းလမ်းများ အွန်လိုင်း) ။ ကျနော်တို့ဟာရိုးရိုးသင်ယူမှုပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီတရားခွင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးနှင့်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများကိုနှစ်ဦးစလုံးခန့်မှန်း5။ parametric fMRI အသုံးပြုခြင်းကျနော်တို့အဘယ်သူ၏တုန့်ပြန်သောဤအချက်ပြနှင့်အညီ modulated, ဤတုံ့ပြန်မှုကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးမှအသက်အရွယ်နှင့်အတူပြောင်းလဲသွားပုံကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဦးနှောက်ဒေသများဖော်ထုတ်, လေ့လာဆန်းစစ်။ ကျနော်တို့အသက်အရွယ်နှင့်အတူ (ဆယ်ကျော်သက်-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်ထားတဲ့) (ယေဘုယျရင့်ကျက်သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုထင်ဟပ်သော) linear ဆိုးကျိုးများနှင့် quadratic သက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဤ subcomponents ၏ပထမဦးဆုံးစာမေးပွဲကိုယ်စားပြုတယ်။
စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ 45 ကျန်းမာပါဝင်သူ (18-8 အသက် 12 ကလေးများ, 16-14 အသက် 19 မြီးကောင်ပေါက်နှင့် 11 လူကြီးများအသက် 25-30) fMRI ဝယ်ယူစဉ်ကတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာသင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ Written အသိပေးသဘောတူညီခကျြရရှိခဲ့သညျ။ သင်တန်းသားများကို ...
အပြုအမူ, ရှိသမျှသင်တန်းသားများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူသော်လည်းမကျပန်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပိုပြီးတိကျမှုနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ဖြစ်လာခဲ့သည် (အပြန်အလှန်က F (5,210) = 9.85, P<0.0001 အတွက်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် F (5,210) = 6.60, Pတုံ့ပြန်မှုကြိမ်များအတွက် <0.0001; နောက်ဆက်တွဲဇယား 1 နှင့် သဖန်းသီး။ 1 အွန်လိုင်း) ။ အရေးကြီးသည်မှာ, တုံ့ပြန်မှုကြိမ်အကျိုးကို x ကိုအသက်အရွယ်အပြန်အလှန် (F (2,42) 5.03 = ရှိခဲ့ P = 0.01) ။ post-hoc စမ်းသပ်မှုမြီးကောင်ပေါက်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ် (t ကို (15) = 3.24, နှိုင်းယှဉ်ပါကကြီးမားသောဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမှသိသိသာသာပိုမိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်တစ်ခုတည်းသောအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုဖြစ်ကြောင်းပြသ P = 0.006; ကလေးများ t ကို (17) = -0.32 များအတွက် P = 0.75 နှင့်လူကြီးများ t ကို (10) = 1.90 များအတွက် P = 0.09) ။
ကျနော်တို့ (သီးခြား stimulus ဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုများ၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ခွင့်ပြုပါရန် fMRI ဒေတာလုပ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲနည်းလမ်းများ နှင့် သဖန်းသီး။2အွန်လိုင်း; ယင်းလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်အဓိကသက်ရောက်မှုများအတွက်တွေ့ နောက်ဆက်တွဲသင်္ဘောသဖန်းသီး။ 3-4 နှင့်ဇယား 2-3 အွန်လိုင်း) ။ ကျနော်တို့မော်ဒယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်အချက်ပြမှုများ (ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးနှင့်ခန့်မှန်းအမှား) နဲ့ဆက်စပ်မှုအသက်အရွယ်မှဆက်စပ်ခဲ့ကြပုံကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
MRI ရလဒ်များ။ (က) z> 2.3 တွင် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးအဆင့်တွင်ဆုံးသောအခါအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုပြသည့်ဒေသများ၊ P<0.05 ။ အဆိုပါ striatal နှင့် angular gyrus ဒေသများအသက်အရွယ်နှင့်အဆိုးဆက်စပ်လျက်ရှိသည်2; ယုတ်အသက်အရွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2 ကနေနုတ်ခဲ့သည် ...
ကျနော်တို့တုံ့ပြန်ချက်မှာအပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားအတွက် quadratic ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများ-The striatum နှင့် angular gyrus နှိုင်းယှဉ်ပါကမြီးကောင်ပေါက်တစ် hypersensitive တုံ့ပြန်မှုပြသရာနှစ်ခုဒေသများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက်ဧရိယာအငယ်သင်တန်းသားများကိုအဟောင်းတွေသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကဤဒေသအတွက်အားကောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကို signal ကိုရှိခဲ့တယ်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုအပေါ်အသက်အရွယ်တစ်အနုတ်လက္ခဏာ linear သက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်; ဤဒေသတွင်ပြင်းပြင်းထန်ထန် (အရွယ်ရောက်သူများတွင်ယခင်အလုပ်အတွက်ရည်မှန်းချက်-oriented လှုံ့ဆော်မှုတန်ဖိုးကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2a)12။ ခန့်မှန်းရခက်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်တုံ့ပြန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အထွတ်အထိပ်သို့သော်လည်းထို့ကြောင့်, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတန်ဖိုး sensitivity ကိုအသက်အရွယ် (အသက်နှင့်အကျိုးစီးပွားအထက်ပါဒေသတစ်ခုချင်းစီအကြားမြေကွက်များအတွက် [ROIs] နှင့်အတူ linearly လျော့နည်းသွားတွေ့ နောက်ဆက်တွဲပုံ။5အွန်လိုင်း) ။
ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးသည်မော်ဒယ်လ်တွင်အမှားအယွင်းများသင်ယူခြင်းမှတစ်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးသည်ခန့်မှန်းခြင်းအမှားထက်အသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလမ်းကြောင်းကိုပြသခဲ့သည်မှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်။ သို့သော်လုပ်ငန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၊ ရွေးချယ်မှုသည်အားဖြည့်ခြင်းဆိုင်ရာသင်ယူခြင်း (ဥပမာ - ရှင်းလင်းပြတ်သားသောမှတ်ဉာဏ်) ထက် ကျော်လွန်၍ အခြားအချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရလာဒ်များကိုရှင်းလင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်သောဒုတိယမော်ဒယ်လ်ကို အသုံးပြု၍ ယခင်စမ်းသပ်မှုများ၏အချိုးအစားအနေနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစီအတွက်အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် (Lin, Adolphs & Rangel, unpublished; နောက်ဆက်တွဲနည်းလမ်းများ အွန်လိုင်း) ။ ကျနော်တို့ကဒီမော်ဒယ်ကနေခန့်မှန်းအမှားတန်ဖိုးများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ခန့်မှန်းအမှားမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အထွတ်အထိပ်သို့ရှိရာ ventral နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal ဒေသများ, အတူသူတို့ striatum နှင့် parietal cortex အတွက်ဒေသများဖေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုထင်ဟပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ model ကနေဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုး analysis ကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် parietal cortex နဲ့ striatum အပါအဝင်ဒေသအတော်များများ, (အတွင်းအသက်အရွယ်နှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအကြား linear နှင့် nonlinear ဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးစလုံးပြသနောက်ဆက်တွဲပုံ။6နှင့်စားပွဲတင်5အွန်လိုင်း) ။ ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး (Non-လွတ်လပ်သော) ရွယ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ဒီမော်ဒယ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားတိုးမြှင့်ဖို့သည်ထင်ရှားကြောင်းပြသပေမယ့်ပြီးရင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား asymptotedနောက်ဆက်တွဲပုံ။7အွန်လိုင်း) ။ ဤရလဒ်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်တန်ဖိုးကိုအချက်ပြမှုများအတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကိုမော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်မှအထိခိုက်မခံခဲ့ကြသော်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အထွတ်အထိပ်ခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်, ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များမှကြံ့ခိုင်ခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဥပမာ (မော်ဒယ်-based ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများအတွက်ထင်ဟပ်သကဲ့သို့ ventral striatum, မမျှော်လင့်ဘဲအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်မှတသမတ်တည်းအထိခိုက်မခံကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်အလုပ်အပေါ်အခြေခံပြီး,7), (ငါတို့သည်သီးခြားစီနှစ်နိုင်ငံ caudate အပါအဝင်လွတ်လပ်သောခန္ဓာဗေဒရွယ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စု putamen ခန့်မှန်းအမှား-related တုံ့ပြန်မှုများ၏ဒေသခံဆန်းစစ်နှင့်နျူကလိယမူရင်းအားဖြည့်သင်ယူမှုပုံစံကို အသုံးပြု. accumbensသင်္ဘောသဖန်း။ 2b) ။ သိသိသာသာအပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားနှင့်ဆက်စပ်သော Striatal ဒေသများသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်မထပ်ခဲ့ပါ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအရွယ်ရောက်ပြီးတသမတ်တည်းလူကြီးများအတွက်ခန့်မှန်းအမှားဆန်းစစ်လေ့လာမှုများများ၌တွေ့မြင် ventral striatal ဒေသတွင်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်တစ်ဦးထက်ပို dorsal ဒေသတွင်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကလေးများအပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားမှဆက်စပ်သည့် striatum မရှိလှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-related အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၏ယခင်တွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့8 အဘိုးပြတ်အချက်ပြမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကဒီတွေ့ရှိချက်, ခန့်မှန်းအမှားမှတိကျတဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြ။ ခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုဖွယ်ရှိ phasic dopamine အချက်ပြအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုရောင်ပြန်ဟပ်13။ မှန်ကန်သောလျှင်ဤကိုမကြာခဏမြီးကောင်ပေါက်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အန္တရာယ်များဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများအတွက်တိုက်ရိုက်ရှင်းပြချက်ပေးပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တိုးလာအန္တရာယ်များအပြုအမူသီအိုရီအတွက်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များတစ်လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုသို့မဟုတ်အလားအလာအပြုသဘောရလာဒ်တစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကိုဖြစ်စေထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာအဆုံးစွန်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်: သည်, တိုးမြှင့်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများ (putatively သာ. ကြီးမြတ် phasic dopamine အချက်ပြမှုများကိုထင်ဟပ်) အပြုသဘောဆောင်သည့်ရလဒ်များပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်14, အပြုသဘောရလာဒ် (နှင့်အရှင် သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ) ရရှိရန်တစ်ခုတိုးလာလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပေါ်ရန်အဆိုပြုထားသော။ တစ်ဦးနုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် coupled အထူးသဖြင့်လာသောအခါထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်တစ်ခု overactive dopaminergic ခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်, ဆုလာဘ်-ရှာတစ်ခုတိုးလာမှုနိုင်1.
ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ယခင်လေ့လာမှုများဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အသက်ကိုက်ညီမှုသက်ရောက်မှုလြှော့ကြပါပြီဘာကြောင့်ပေါ်အလင်းကိုသွန်းစေနိုင်သည်။ ပထမဦးစွာအားလုံးလေ့လာမှုများအသက်အရွယ်နှင့်အတူ nonlinear ဆက်ဆံရေးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမှတ်ချက်ချမရနိုငျသောအဓိပ်ပာယျ, ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးမှဆယ်ကျော်သက်နှိုင်းယှဉ်ဘူး။ ထို့ပြင် "ဆယ်ကျော်သက်" ၏အဓိပ္ပါယ်လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်မထားပါဘူး။ ဒုတိယအချက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာသင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်နှုန်း se အလုပ်တခုကိုလုပ်နေတဲ့အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတျကွောငျးကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်, အရှင်ဆုလာဘ်များနှင့်စွန့်စားမှု-ယူပြီးစာပေများတွင်အသုံးပြုသည်အခြားတာဝန်များကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ တတိယကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးသင့်လျော်သောနားလည်မှုတစ်ဦးချင်းစီတရားခွင်အစိတ်အပိုင်းများကို (စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု, ရွေးချယ်မှုများနှင့်တုန့်ပြန်ချက်) ၏ပြိုကွဲနှင့်အတူမော်ဒယ်-based ချဉ်းကပ်၏အသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်သည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာ ပို. ပို. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့ကာလဖြစ်ပါသည်, ဤကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်သောအန္တရာယ်များ, ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူမတော်တဆသေခံခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲစတင်ခြင်းအပါအဝင်သိသာထင်ရှားသောရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အာရုံကြောအခြေခံနားလည်သဘောပေါက်အရေးပါသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အလုပ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ်-ရှာတပံ့ပိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဤအရေးကြီးသောကာလ၏အနာဂတ်လေ့လာမှုများများအတွက်ဝတ္ထုပစ်မှတ်ထောက်ပံ့ပေးသောတိုးမြှင့်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများ၏ရှေ့မှောက်တွင်, ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဒါဟာသုတေသနစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားသိပ္ပံ (5R24 MH072697), မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (5F31 DA024534) ၏အမျိုးသားအင်စတီကျု, အ McDonnell ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် della မာတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကထောက်ခံခဲ့သည်။
စာရေးသူထောက်ပံ့ JRC data တွေကိုရှာမှီးကောက်ယူသည်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးသားခဲ့သည်။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ, ယွမ်နှင့် SYB အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ FWS data တွေကိုရှာမှီးဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ BJK နှင့် RAP အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။
1. ကာဇီ BJ, Getz S ကိုသွပ်ရည်စိမ်အေ dev ဗျာ 2008;28: 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2. Kahneman: D, Tversky အေ Econometrica ။ 1979;47: 263-91 ။
3. Chib VS, Rangel တစ်ဦးက, Shimojo S က, O'Doherty JP ။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 12315-20 ။ [PubMed]
4. တွမ်သည် SM, Fox က CR, Trepel ကို C, Poldrack RA ။ သိပ္ပံ။ 2007;315: 515-8 ။ [PubMed]
5. Rescorla RA, Wagner AR ။ ခုနှစ်တွင်: classical ကိုက် II ကို: လက်ရှိသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ Black ကတစ်ဦး, Prokasy WF, အယ်ဒီတာများ။ Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု Crofts; နယူးယောက်, NY: 1972 ။ စစ။ 64-99 ။
6. Schultz W ကဒါယန်း P ကို, မွန်တဂူ PR စနစ်။ သိပ္ပံ။ 1997;275: 1593-9 ။ [PubMed]
7. Pagnoni, G, Zink CF, မွန်တဂူ PR စနစ်, Bern GS ။ နတ် neuroscience ။ 2002;5: 97-8 ။ [PubMed]
8. သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, et al ။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 6885-92 ။ [PubMed]
9. et al Bjork JM ။ J ကို neuroscience ။ 2004;24: 1793-802 ။ [PubMed]
10 ။ et al မေလ JC ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;55: 359-66 ။ [PubMed]
11 ။ Knowlton BJ, Mangels ဂျာ Squire LR ။ သိပ္ပံ။ 1996;273: 1399-402 ။ [PubMed]
12 ။ ယုန်က TA, O'Doherty J ကို, Camerer CF, Schultz W က, Rangel အေ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 5623-30 ။ [PubMed]
13 ။ D'Ardenne K ကိုလူယာသည် SM, Nystrom LE, Cohen ကို JD ။ သိပ္ပံ။ 2008;319: 1264-7 ။ [PubMed]
14 ။ Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 1998;28: 309-69 ။ [PubMed]